Ned For Speed: Tsy misy fetra - Diso fanantenana ny zavakanto elektronika | Vaovao IPhone
Miguel Hernandez | | Vaovao IPhone, Ocio
Ny filana vaovao haingana: Tsy misy fetra dia tena nampanantena. Raha tsy nisy fetra dia toa ho nahafinaritra fa ity lalao video ho an'ny iOS ity dia nanome sary tsy mampino, haavon'ny fanaingoana mihoatra ny eritreritra, avy amin'ny tanan'ny veterana amin'ity lalao video ity sy amin'ny anarana hoe Need For Speed. Inona no mety tsy mandeha?, zavatra maro, na dia toa tsy azo eritreretina aza, nanao izany indray ny Electronic Arts. Ny maodely freemium dia takatra tokoa amin'ny mpamorona kely vao manomboka amin'ny app, fa ny fomba Pay-to-Win izay nampiharin'ireo Electronic Arts amin'ny ankamaroan'ny lalao misy amin'ny App Store dia mahonena.
Aiza ny Real Racing karama izay namela anao hankafy ny traikefa feno?, Na dia marina aza fa ny sary, ny menio ary ny tantara Need for Speed: Tsy misy fetra dia mahafinaritra, atsaharo ny fanisana. Hanombohana azy, voafetra ny fanaingoana, tsy afaka manampy ampahany sasany fotsiny ianao, izay mandresy amin'ny hazakazaka, ary amin'ny hazakazaka dia mila lasantsy. Voafetra ny lasantsy, ka noho izany dia asaina ianao handoa vola hanohy hilalao. Ny voalohany eo amin'ny handrina dia manasa anao ho modely amin'ny personalization "tsy misy fetra", fa amin'ny torolàlana tadiavin'izy ireo. Ny zavatra mahatsikaiky indrindra dia ny anoloran'izy ireo anao ho lalao "avy amin'ireo mpamorona ny Real Racing 3", raha ny mekanisma mitondra fiara dia tsy misy toa azy mihitsy.
Ny familiana dia azo antoka fa tsy simulation, fa tsy arcade ihany koa. Toa mandeha amin'ny lalàm-by ny fiara, tsy ilaina ary tsy misy ny freins, ary angano ny fikorisana. Ekeko fa mpankafy ny andian-dahatsoratra Need for Speed ​​aho ary niandry an'ity lalao ity aho, Izay tsy natokako mihoatra ny adiny 3 satria maimbo Pay-to-Win an-kilaometatra maro. Ny vola fandraisam-bola sy ny fanomezana kely omen'izy ireo anao rehefa mijanona tsy milalao ianao dia miresaka momba ny lalao ihany koa. Na izany na tsy izany, heveriko fa tsy misy olon-kafa tsy nahatakatra izay kasain'ny Electronic Arts amin'ny lalao farany nataony, tsy misy chicha mihitsy, na dia zaza roa taona aza (angamba io no mety ho mpihaino azy). Mampalahelo fa ireo lalao izay naloany sy nankafiziko dia nanjavona tsikelikely tao amin'ny App Store, na dia teo aza ireo doble toa ahy. Amin'ny 3 Novambra, tonga ao amin'ny PlayStation 4 ilay filàna efa nandrasana hatry ny ela, andao hojerentsika izay nanaitra antsika tamin'izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Ocio » Ned For Speed: Tsy misy fetra - Diso fanantenana indray ny zava-kanto elektronika
ค ภ Ŧ ภ ๔z (@DanFndz) dia hoy izy:
Ny mampihomehy momba azy dia ny nampakarako horonantsary beta 9 volana lasa izay ary mazava ho azy fa nilaza aho fa m…. Avy tamin'izy ireo dia nilaza tamiko bebe kokoa na latsaka izy ireo fa tsy afaka milaza izany aho, ary hanatsara izany izy ireo saingy mbola mijanona ho toy izany ihany, raha fintinina dia manamafy izay nolazaiko tamin'ny andro aho.
Mamaly an'i ๔ ค ภ Ŧ ภ ๔z (@DanFndz)
Dani santos dia hoy izy:
Lalao mahafinaritra !! Raha tsy milaza lalao hafa amin'ity karazana ity izay mitovy na tsara kokoa. Ny tena hazakazaka 3? fa raha tsy misy volamena dia tsy azo atao ny manana fiara na fanatsarana? Tongava amin'ny lehilahy LALAO ITY ARY MANOKANA IZAY lazainao
Valiny tamin'i Dani Santos
Ary koa, maharary ny filaminana, efa nangalarin'izy ireo in-2 ny kaontiko
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho, napetrak'izy ireo 100% ny lalao. Navoakako izy io (taorian'ny herintaona niandrasana dia efa tany amin'ny Stores App hafa any amin'ny firenen-kafa izy ireo) ary rehefa afaka kelikely dia nesoriko noho ny antony maro samihafa. Hazakazaka latsaky ny 1 minitra, mitondra fiara 0 satria, araka ny filazanao azy, mandeha amin'ny làlambe izy ireo ... ary ny ratsy indrindra dia tsy maintsy mandoa vola ianao vao miaina.
Ny tiako holazaina dia aleoko mandoa 6 euro amin'ny lalao tsara izay azoko atokana ny fotoana sy ny ezaka tadiaviko (na betsaka na kely) fa farafaharatsiny mba tsy mamitaka antsika amin'izany fomba izany izy ireo.
Mbola tadidiko tamin'ny nostalgia rehefa nividy ny asphalt an-tanànako voalohany tamin'ny iPhone 3G !!!
Ny marina dia diso fanantenana aho amin'ny lalao, mahatsiaro ho lalao ho an'ny ankizy 5 taona aho, mamela ny filana be ny sary, tsy maharitra iray minitra ny hazakazaka, tsy misy fanaingoana, tena diso fanantenana aho fa aleoko kokoa handoa 6 $ eo ho eo fa manana antoka fa hahazo tombony indrindra amin'ny lalao izy Fahadisoam-panantenana tanteraka.
Lalao mahafinaritra raha toa ka 1 taona ianao, arcade super tanteraka. Toy ny tena racing 3 tsy misy (io no lalao tsara indrindra misy amin'ny smartphone)
Chuy dia hoy izy:
Ny tutorial ihany no nataoko fa tsy nilalao azy intsony XD
Valiny tamin'i Chuy
Tsy manana hevitra ianao. Ny tena Racing dia ratsy noho ity. Raha maharitra ny hazakazaka. Fa andramo manatsara ny fiara amin'ny volamena hahahahahahahahaha fantatrao be izany raha ianao Jereo ary efa nisy mihitsy aza ny hazakaza-tsoavaly voajirika niaraka tamin'ny farantsakely sy volamena tsy tambo isaina ary niteraka aho !!!!
Snoopdog dia hoy izy:
Ireo izay milaza fa tsy misy fetra ny NFS dia tsy mendrika izany, tsy mahalala na inona na inona izy ireo, manome an'arivony an'arivony ity lalao ity, noho ny antony tsotra sy tsotra fa tsy dia mitsiriritra toa ilay iray hafa, manana dinamika tsara izy io ary azonao atao milalao mandritra ny ora maro nefa tsy mila mandany denaria. Ny fanamboarana sy ny hetsika dia tena tsara, ny hany zavatra tsy haiko dia ny hoe ny polisy dia marani-tsaina kokoa ary afaka misambotra anao, toy ny nataony tamin'ny kinova NFS hafa. Tsy hanana sary tsara indrindra eny an-tsena izy io fa manatanteraka tsara ny andraikiny amin'ny fialamboly, ho antsika mpankafy hazakaza-piara.
Valiny amin'i SnoopDog
Miombon-kevitra amin'ireo izay milaza aho fa misy dikany ity lalao ity. Ary na iza na iza miteny hafa dia tsy tiany lalao fiara na moto. Izy ireo dia nanana fototra tena tsara teo amin'ny sehatry ny filalaovana sy ny lalao toy ny NFS Most Wanted. Mikasika ny RR3, tsara ihany koa, fa ny zavatra ratsy dia ny fiandrasana vao afaka milalao, rehefa manamboatra ianao. Mino aho fa raha tsy mihoatra ny 6,99 € ny vidiny na tsy fandaniana be izany fa marina ihany koa fa raha ny NFS No Limits dia fandaniam-bola fotsiny izany.
Ny tena marina dia diso fanantenana aho fa miandry ny famenoana ny solika hanohy hilalao (na tapakilan'ny fifaninanana) fa mampiala voly ny lalao. Izy io dia manana karazana maody: clandestine, andiany, fifaninanana, fifaninanana manokana, fanatanterahana ary fanovana ny vatana, na dia somary nahantra aza ity farany. Milalao amin'ny andian-tantara sy miafina fiara dia mahazo volamena, vola, faritra ary mamoha, izany hoe, raha milalao betsaka ianao dia mahazo anjara na fiara. Mazava ho azy fa izay mandoa vola dia hanao tsara sy haingana kokoa, fa resaka fialamboly io. Mbola tsy nandoa na tsy handoa denaria iray aho, ary mbola mahafinaritra be izao. Ahoana raha tokony hamboarin'izy ireo (averiko indray izany) dia ny olan'ny lasantsy, rehefa milalao aho dia tavela miaraka amin'ny faniriana hanohy fa tsy mijanona ny lasantsy.
Naparitako ny zanako finday tamin'ny zanako lahy 5 taona efa nilalao "Undercover", "Most wanted" ary "shift" tamiko. Rehefa nilalao betsaka aho dia afaka nitondra ny fiara. Natolotro azy ity lalao ity mba hahitako ny fomba nandreseny tamin'ny hazakazaka voalohany nihazakazahany ... In-droa aho no nilalao azy ity mba hahitako ny fanaingoana sy ny zavatra natolony anao maimaim-poana fa tsy ho fandoavam-bola ary nofafako ... Mahamenatra toy ny natao hamoahana ny iray amin'ireo sagasy tsara amin'ny lalao fifaninanana ... mbola manana ny The most Wanted napetraka amin'ny iphone 6 aho ...